.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Pink Folder Icons For Computer
Pink Folder Icons For Computer
မနေ့ကdesktop ပေါ်က folder လေးတွေကိုလှလှလေးပြင်ချင်တာနဲ့ online မှာ icon လေးတွေလိုက်ရှာပြီး photoshop နဲ့ကလိထားတာလေးတွေပါ။
Download Link >>>> icons_1.rar
Download Link >>>> icons_2.rar
ဒေါင်းထားတဲ့ zip file လေးကိုဖွင့်ပြီး အထဲက folder လေးကို desktop ပေါ်မှာ copy ကူးလိုက်ပါ။
ပြောင်းချင်တဲ့ folder ပေါ် right click.>>> properties.>>> customize. >>> change icon. >>> browse ကို click ပြီး
desktop ပေါ်ကခုန ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ထဲကကြိုက်ရာ icon ကိုရွေးပြီး apply >>> ok နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Posted by FlashSongCrazy at 09:57